NASAn Oraayen gara samiitti erguun gadaa Maarsii eegale - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured NASAn Oraayen gara samiitti erguun gadaa Maarsii eegale
NASAn Oraayen gara samiitti erguun gadaa Maarsii eegale
Dhaabbanni Qorannoo Samii Ameerikaa [NASA] xayyaara samii Oraayen jedhamu har’a sa’aa 7:05 akka nannoo baha Ameerikaatti gara samiitti erge. Bulchaan NASA, Chaarles Boolden, ‘har’a guyyaa jalqabaa isa gadaa Maarsiiti,’ jechuun dubbate. Akka Karoora NASA tti yaaliin amma eegalame kuni boqonnaa jalqabaa isa nama [astronaut] gara Plaaneetii Diimtuu [Maarsii] itti erguuti. Yaaliin amma NASAn itti jiru kuni milkaaye taanaan tankarfiin itti aanu nama gara Maarsiitti erguudha. Kuni ammo yeroo woggaa 20 hincaalle keessatti dhugooma jedhee amana NASAn.
Ammaafi Oraayen sa’aa afuriifi cinaaf samii keessa, lafa irraa km 5760 ol fagaattee, naannawaa turti. Yeroo Oraayen sa’aa 4 ½ samii keessa balaliitutti NASAn meeshaaleen too’annaa fi elektrooniksii, kompiyuutaroonni akamitti akka hojjatan, rakkoon maal akka irratti mul’atan qorata. Meshaaleen oo’a ittisan kan Oraayen keessan jiranis oo’a hanga digrii 4000 ta’u akkamitti akka dandamatanis ni ilaala, NASAn. Gama biroon deebi’anii gara lafaatti gadi bu’uun ilma namaaf hangam akka bala-qabeessa ta’es beekuun qaama qorannoo kanaati.
Oraayen gara lafaatti yoo deebitu galaana, qarqara Ameerkiaa gara dhihaa irraa km 960 fagaattee, irratti buuti. Humni Galaana Ameerikaa [navy] galaana irraa Oraayeniin fuudhee gara buufata Kenediitti kan geessu ta’uu gabaasoleen agarsiisu.
Previous articleSooranni naannoo Mediteraaniyaanii umrii namaa dheeressuu danda’a jedhame
Next articleArsenaalii fi Cheelsiin Injifataman; Manchastar Siitiin Cheelsitti dhiphise